Blackmagic Design မှ Blackgagic Video Assist အသစ် 12G ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် Blackmagic ဗီဒီယို 12G Assist ကြေညာ
Fremont, California ပြည်နယ် - သောကြာနေ့, 13 စက်တင်ဘာလ 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Blackmagic ဗီဒီယိုကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များပေါင်းစပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းချက်သစ်မော်ဒယ်များနေသော 12G Assist ကြေညာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်သစ်မျက်နှာစာများ built-in တောက်ပ HDR ဖန်သားပြင်, အဆင့်မြှင့်ဘက်ထရီ, 12G-SDI ပြီးအများကြီးပိုပါရှိပါတယ်။ Blackmagic ဗီဒီယို 12G ကနေစက်တင်ဘာလ 2019 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Assist Blackmagic ဒီဇိုင်း အမေရိကန် $ 795 ကနေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
အဆိုပါ Blackmagic ဗီဒီယို 12G သည့်အပေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Assist Blackmagic ဒီဇိုင်း IBC 2019 တဲ # 7.B45 ။
အသစ် Blackmagic ဗီဒီယို 12G HDR ကို Assist ဆို SDI မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကထပ်ပြောသည်သို့မဟုတ် HDMI အားလုံးအတွက်ကင်မရာ HD, က Ultra HD, 2K နှင့် 4K DCI ကို formats ။ အသစ်တိုးတက်လာသောဒီဇိုင်းကိုတိုးမြှင်အာရုံစိုက်ထောက်ခံကင်မရာများကနေမှတ်တမ်းတင် features တွေ, 4D LUTs နှင့်ဇာတိ Blackmagic RAW ကူညီရန်မျက်နှာစာများ built-in ထိုကဲ့သို့သော HDR ကိုအလုပျအတှကျတောက်ပဖန်သားပြင်အဖြစ်တီထွင်မှု, တာလီချိုးညွှန်ပြချက်, 3, ပါဝင်သည်။ 12G-SDI နှင့် HDMI 2.0 "နှင့် 5" မော်ဒယ်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် 7, ဖောက်သည်များ 2160p60 အားလုံးကိုပုံစံများကိုတက်အတွက်လုံးဝနီးပါးမဆိုကိရိယာမှမှတ်တမ်းတင်ဘို့ထောက်ခံမှုရ။ တစ်ဦးကတောက်ပထိတွေ့မျက်နှာပြင် HDR ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတင်၏ပိုကောင်းတဲ့အမြင်သေချာ, ဒါမှမဟုတ်နေရောင်ခြည်အတွက်အိမ်ပြင်ရိုက်ကူးသည့်အခါ။ အသစ်ဒီဇိုင်းကိုလည်းအဆင့်မြှင့်ဘက်ထရီ features နှစ်ခုစံထောက်ခံပါသည် Sony က L-series ဘက်ထရီ။ ဤသည် Blackmagic ဗီဒီယို 12G မယုံနိုင်လောက်အောင်စွယ်စုံနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံအညွန့်၏မျိုးဆက်သစ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု Master, ထုတ်လွှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် Assist ကိုဆိုလိုသည်။
Blackmagic ဗီဒီယိုနှစ်ခုမော်ဒယ်များရှိပါတယ်ကုန်းပတ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဆန်းသစ်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် user interface ကိုအဖြစ်အသံသွင်းကြည့်ရှုရန်ကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်အပါအဝင်တစ်ခုချင်းစီမော်ဒယ်နှင့်အတူ 12G Assist ။ နှင့်7"မော်ဒယ်မြင့်သော frame rate ကိုအဘို့အ 12G-SDI ပါဝင်သည်အဆိုပါ Blackmagic ဗီဒီယို2Assist" နှစ်ဦးစလုံး5စဉ် 7G မော်ဒယ်ကိုလည်း 12 မီဒီယာ slot နှစ်ခုပါဝင်သည် " က Ultra HD, Analog စအသံ, ကို USB-C အပြင်ပ disk ကိုမှတ်တမ်းတင်ဘို့သွင်းအားစုအပေါင်းတစ်ခုရှေ့တွင် panel ကစပီကာနှင့်ဘေးထွက် headphone jack တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖောက်သည်များမှာလည်း mounting များအတွက်2နောက်ဘက်ဘက်ထရီ slot နှစ်ခုရ Sony က L-series ဘက်ထရီ, ဖောက်သည်တောက်ပ HDR ကို screen များအတွက်အလုံအလောက်အာဏာနှင့်ပိုမိုမြင့်မားမြန်နှုန်းရှိဒါ က Ultra HD အီလက်ထရွန်းနစ်။ တစ်ဦးက 12v တစ်လောကလုံး power supply စတူဒီယိုများအတွက်သို့မဟုတ်တည်နေရာအသုံးပြုမှုအပေါ်ပါဝင်သည်။
Blackmagic ဗီဒီယိုကစူပါတောက်ပ 12nit display ကိုရဲ့အဖြစ် 2500G HDR, ကင်မရာများများအတွက်စံပြအဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါတယ် Assist စားသုံးသူကင်မရာများအပေါ်တွေ့ရသောအလွန်သေးငယ်သော display တွေထက်ပိုကြီးဖြစ်ပါသည်, ပေါင်းအသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အာရုံစိုက် features နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုဖိုင် Format ကူညီဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ ဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်တည်းဖြတ်ရေးဆော့ဖျဝဲပေါ်တွင်အသုံးပြုခေတ်သစ်ဖိုင် Format မှဟောင်းများကိုထုတ်လွှင့်ကင်မရာများအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပွုနိုငျသောကွောငျ့ဗီဒီယိုကို Assist ကိုလည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများအဘို့ကြီးစွာသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ software ကိုဖောက်သည်ကိုအသုံးပြုဖို့အဘယ်အရာကိုတည်းဖြတ်, ဗီဒီယိုဖောက်သည် Apple က ProRes အတွက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ဖောက်သည်များကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ကိုထောကျပံ့ပေးနိုင်ပါတယ် Assist, လွန်စွာလိုလားသော DNx နှင့် Blackmagic RAW ။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ HDMI နှင့် 12G-SDI ဖောက်သည်ကိုမဆိုစားသုံးသူကင်မရာ, အသံလွှင့်ကင်မရာသို့စပင် DSLR ကင်မရာများကဆက်သွယ်နိုင်သည် inputs ။ ထို့နောက်ထောက်ခံကင်မရာများပေါ်, ဖောက်သည်များပင် Blackmagic RAW နှင့်အတူ RAW စတိုင် Workflows မှ upgrade နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဆန်းသစ် touchscreen က LCD ကို user interface ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။ မျက်နှာပြင်တွင်သူတို့၏အသံသွင်းမှတဆင့် scrolling များအတွက် mini ကိုအချိန်ဇယားအဲဒီမှာကစားဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံခလုတ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ကြ၏, ပေါင်း။ ပြေးရတာမှဖောက်သည်များလုပ်နိုင်ပင် image ကိုပွတ်ဆွဲ။ အဆိုပါ LCD ကို timecode, ဗီဒီယိုစံ, မီဒီယာအဆင့်အတန်းအဖြစ်အသံမီတာတစ်ဦးဦးခေါင်းတက် display ကိုပါဝင်သည်။ မျက်နှာစာများထိမျက်နှာပြင်ကနေတဆင့် enabled နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အာရုံစိုက်နှင့်ထိတွေ့ကူညီ။ Plus အားဖောက်သည် 3D LUTs load လျက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ဖောက်သည်များရရှိရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ကတ်များ flash မှမှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင်ဗီဒီယိုကို Assist, လေ့ရရှိနိုင်ပါ SD ကဒ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသည်။ ဖိုင်တွေကိုစံ SD ကဒ်များဒါမှမဟုတ်ပိုမြန် UHS-II ကိုကတ်များအပေါ်ရှည်လျားသောအသံသွင်းခွင့်ပြုပါရန်လုံလောက်သောအသေးဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်အဆုံးမဲ့အရှည်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုပင်မှတ်တမ်းတင်ကာလအတွင်းမည်သည့်အပြည့်အဝကတ်များထုတ်ဖလှယ်နိုင်အောင်အဆိုပါပိုကြီးတဲ့ဗီဒီယို 12G7Assist "မော်ဒယ်ပင်2SD ကဒ် slot နှစ်ခုပါဝင်သည်။ သူတို့က, သေးငယ်တဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ကြောင့်စံ SD ကဒ်များဒါမှမဟုတ်ပိုမြန် UHS-II ကိုကတ်များထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။
အခြားမီဒီယာအမျိုးအစားများကိုမှမှတ်တမ်းတင်လိုအပ်ပါသည်လျှင်, USB-C ကိုချဲ့ဆိပ်ကမ်းကိုဖောက်သည်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ပြင်ပကို flash disk ကိုအတွက် plug ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Blackmagic HyperDeck မော်ဒယ်များကဲ့သို့အခြားအသံဖမျးနှင့်အတူလွယ်ကူသော SSD ကိုလိုက်ဖက်မှုတစ်ခု Blackmagic MultiDock 10G ထည့်သွင်းဆိုပါစို့။ ဖောက်သည်ကိုပင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပြီးပြင်ပ disks ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မျက်နှာပြင် menus တွေပေါ်ရ။
ဗီဒီယိုကို Assist, ထိုကဲ့သို့သော SD ကများအတွက် Multi-rate ကို 12G-SDI အဖြစ်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဆက်သွယ်မှု၏ကျယ်ပြန့ features HDနှင့် က Ultra HD SDI devices များ။ HDMI အဘို့အပါဝင်သည် HDMI စားသုံးသူရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုပရိုဂျက်မှကင်မရာများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး။ အဆိုပါ7လက်မမော်ဒယ်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ပြင်ပအသံရောနှောထံမှအသံ input ကိုပေးလျက်ရှိသော Mini ကို XLR သွင်းအားစုပါရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုပင်အာဏာကို connector ကိုသော့ခတ်နဲ့ 12V DC ကပါဝါဆက်သွယ်မှုလည်းပါဝင်သည် Assist ။
ဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် HDR ကိုစံချိန်စံညွှန်းများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်နဲ့အလွန်အမင်းတောက်ပသောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် HDR Workflows အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Plus အားမြင့်မားတောက်ပမျက်နှာပြင်ဖြစ်နိုင်သောတောက်ပနေရောင်ခြည်ထဲမှာပြင်ပပစ်ခတ်မှုစေသည်။ အဆိုပါ HDR ပုံစံများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါပင် HDR မျက်နှာစာများပြောင်းလဲမျက်နှာစာများအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ files မှန်ကန်သော HDR သတင်းအချက်အလက်ထို့နောက် SDI နှင့်အတူ tagged ကြသည်နှင့် HDMI သွင်းအားစုကိုလည်းအလိုအလြောကျ HDR ဗီဒီယိုကိုစံချိန်စံညွှန်းများ detect ပါလိမ့်မယ်။ static metadata ကို PQ နှင့် HLG ကို formats ကတော့ ST2084 စံနှင့်အညီကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဖမ်းယူရေးကိုကိုင်တွယ်နိုင်အောင်ထွန်းတောက် LCD ကိုပိုမိုကျယ်ပြန်အရောင်အစအဆုံးအကုန်ရှိပါတယ်။ 2020 နှင့်ဖမ်းယူရေး။ 709 colorspaces ။ ဗီဒီယို built-in the LCD ကိုအရောင်အစအဆုံးအကုန်ပင် DCI-P100 ပုံစံ၏ 3% ကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင် Assist ။
ဖောက်သည်များစံချိန်စံညွှန်းများထုတ်လွှင့်ဖို့လိုက်နာမှုသေချာနိုင်ပြီးကြောင့်လည်းခရီးဆောင် waveform စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုကို features တွေအပြည့်အဝပြည်တွင်းရေး waveform စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး Assist ။ အဆိုပါ waveform display ကိုဗီဒီယိုသွင်းအားစုဒါမှမဟုတ်ပြန်ဖွင့်အချက်ပြမှုတစ်ခုရိုးရာတောက်ပ (ရောင်ခြည်) အဆင့်ဆင့်အမြင်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ vectorscope display ကိုဖောက်သည် 100% SDI ရည်ညွှန်းအဆင့်ဆင့်မှာအရောင်များ၏ပြင်းထန်မှုကိုမြင်ရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖောက်သည်များမှာလည်းအရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားမဝင်အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးနေများအတွက်စံပြဖြစ်သည့် RGB ချီတက်ပွဲ display ကိုရယူပါ။ Histogram သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပျေါလှငျသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်အရိပ် clipping အတွက်အနက်ရောင်အသေးစိတ်မှအဖြူ၏ဖြန့်ဝေပြသထားတယ်။ အတိုင်းအတာ built-in ပင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုပေါ်တွင်, ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းအတာရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာရုပ်ပုံမြင်ကွင်းထဲမှာသေးငယ်တဲ့ရုပ်ပုံအဖြစ်မွမ်းမံလေ၏နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ SDI နှင့် HDMI ဆက်သွယ်မှု, Multi-နှုန်းမှာဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့် SD ကကိုင်တွယ် HDနှင့် က Ultra HD။ SD ကကို formats NTSC နဲ့ PAL ပါဝင်သည်။ 720p HD စံချိန်စံညွှန်းများ 720p50 နှင့် 59.94p ပါဝင်သည်။ 1080i HD ယှက်နွယ်ကို formats 1080i50 နှင့် 59.94 ပါဝင်သည်။ 1080p HD ကို formats 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 နှင့် 60p ပါဝင်သည်။ ဖောက်သည်ကိုတောင် 1080 PsF ကို formats လုပ်နိုင်ပါတယ်။ က Ultra HD 2160p59.94 အထိထောက်ခံသည်။ ဖောက်သည်ကိုတောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်အလုပျအတှကျ 2p မှတက် 4K နှင့် 25K DCI နှုန်းထားများမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းစံ 17 နှင့် 33 အမှတ် 3D LUT ဖိုင်များ, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအမှုတော်တို့ကို၎င်းထိုကဲ့သို့သော Rec.2020 မှဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်တိုးချဲ့နှင့်ပိုပြီးအဖြစ် LUTs built-in အတူအလုပ်လုပ်နိုင် Assist ။
ဖောက်သည်အချိန် transcoding မီဒီယာဖြုန်းရန်မလိုပါဒီတော့ဗီဒီယိုကိုစံပွင့်လင်းဖိုင် Format ကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းများ Assist ။ အားလုံးပုံစံများဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ 10-bit မှာ ProRes သို့မဟုတ် DNx ဖိုင်တွေထဲမှာအပေါင်းတို့နှင့်ကနေမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့် HDMI ထောက်ခံကင်မရာများနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ် SDI ကင်မရာများအဖြစ် 12-bit မှာ Blackmagic RAW ။ အားလုံးမီဒီယာဖိုင်တွေကိုအကောင်းဆုံးအားလုံး operating system များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
Blackmagic RAW ကင်မရာများကနေအာရုံခံကိရိယာအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးဖမ်းယူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုတော်လှန်ရေးသစ်ကိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကို Assist ထိုကဲ့သို့သော Panasonic က EVA1 အဖြစ်ရေပန်းစားကင်မရာများကနေမှတ်တမ်းတင် Blackmagic RAW ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ကို Canon C300 MK II ကို။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားဆူညံသံများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အပိုငျးအမှု compressed ထားတဲ့ H.264 အဖြစ်ရေပန်းစားကင်မရာကို formats နှင့်အတူပြဿနာများကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဒါဟာအစဖောက်သည်ကိုတည်းဖြတ်စဉ်တွင်အားလုံးအရည်အသွေးမဆိုအရှုံးမရှိဘဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကို override ထို့နောက်က ISO, အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ထိတွေ့မှုမသတ်မှတ်နိုင်အောင် metadata ကိုအဖြစ်ကင်မရာဆက်တင်များကယ်တင်တော်မူ၏။ Blackmagic RAW file တွေကိုလည်းအတူလုပ်ကိုင်ဖို့သူတို့ကိုလွယ်ကူသောအောင်သုံးစွဲဖို့အသေးစားနှင့်အစာရှောင်ကြသည်။
Blackmagic ဗီဒီယို 12G အပိုအသံပစ္စည်းကိရိယာများန်းကျင်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေးအများစုကင်မရာများမှာတွေ့ရှိအသံအရည်အသွေးကိုထက်အများကြီးပိုကောင်းအရည်အသွေးကိုရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအသံဖမ်း built-in တစ်ခုတို့ပါဝင်သည် Assist ။ SDI ပုံစံများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည့်အခါဖောက်သည်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်အသံ၏ 2, 4, 8 သို့မဟုတ် 16 channel များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်ဗီဒီယို7"မော်ဒယ် compressed လုပ်မထားတဲ့ 192 နှင့်နမူနာနှုန်း 16 နည်းနည်းမှာ 24 kHz ၏မြင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အော်ဒီယိုနမူနာမှုနှုန်းကိုထောက်ပံ့သော Phantom ပါဝါနှစ်ခု XLR Analog စအသံသွင်းအားစုရှိပါတယ် Assist ။ ဖောက်သည်အသုံးပြုသူကို select Vu သို့မဟုတ် ppm ballistics နှင့်အတူဖန်သားပြင်အသံမီတာအပေါ်သုံးပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖောက်သည်များကသုံးစွဲဖို့အခြားဘာသာစကားသင်ယူဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်အကွိမျမြားစှာဘာသာစကားမြားအပြည့်အဝထောက်ခံနေကြသည်။ ပံ့ပိုးမှု, စပိနျဂျာမန်, ပြင်သစ်, ရုရှား, အီတလီ, ပျေါတူဂီနှင့်တူရကီအင်္ဂလိပ်, တရုတ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, အဘို့ပါဝင်သည်။
Blackmagic ဗီဒီယို Assist 12G ထဲကဖိုင်တွေကိုဘုံဖြစ်ကြပြီးအားလုံး operating systems တွေနဲ့သို့မဟုတ်အများဆုံးဗီဒီယိုကဆော့ဖျဝဲထဲမှာသဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်များကအလွယ်တကူကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်မီဒီယာကိုဝင်ရောက်ပုံမှန် disk တွေလို files တွေကို access လုပ်နိုင်မီဒီယာ ExFAT သို့မဟုတ် HFS + အသုံးပြု. ချပ်စေနိုင်သည်။ DaVinci ဖြေရှင်းရန်ကအားလုံးကိုတဦးတည်းဆော့ဖ်ဝဲ application ထဲမှာတည်းဖြတ်, အရောင်ဆုံးမခြင်း, အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု features ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Assist ဗီဒီယိုနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်စုံလင်သည်။
"မူလ Blackmagic ဗီဒီယိုမော်နီတာနှင့်အသံဖမျး Assist အလွန်ရေပန်းစားနှင့်အထက်ကင်မရာများ upgrade ဖို့စိတ်ကူးလမ်းအဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအထွေထွေထုတ်လွှင့်သည့်ဒေသများတွင်အသုံးပြုရန်ခဲ့ကြတယ်" Grant ကအသေးသုံးငွေကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို။ "ဒီမော်ဒယ်သစ်တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုးတက်မှုဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ထံမှသင်ယူခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့ကိုသင်ခန်းစာများကိုထည့်သွင်း ဟောလိဝုဒ်။ သူတို့ကတောက်ပ LCD screen များ, 12G-SDI, Blackmagic RAW, ပိုကောင်းတဲ့အာရုံ tools တွေကိုကူညီ, ရလာဒ်ကဒိ, 3D LUTS ပြီးအများကြီးပိုရှိသည်! သူတို့ကဒါကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြပြီးအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င်! "
Blackmagic ဗီဒီယို 12G အင်္ဂါရပ်များ Assist
တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်နှင့် archive ကိုအသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်စတိုင်အာရုံစိုက်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ LCD မျက်နှာပြင် tools တွေကိုကူညီ။
အများအားရရှိနိုင်မီဒီယာများအတွက် SD က / USH-II ကိုကဒ်ထောက်ခံမှု။
Records ကိုပြင်ပက USB-C မှာမီဒီယာ disk တွေဖို့ကိုညွှန်ကြား။
12G-SDI နှင့် HDMI , SD ကအတွက်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ HD နှင့်က Ultra HD.
တောက်ပ 2500nits ကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန် LCD ကိုနှင့်အတူအဆင့်မြင့် HDR ကိုထောက်ခံကြောင်း။
မျက်နှာစာများ built-in waveform, vector, ချီတက်ပွဲနှင့် Histogram ပါဝင်သည်။
SD ကများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Multi နှုန်း 12G-SDI နည်းပညာ, HD နှင့်က Ultra HD.
3D LUTs စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လူကြိုက်များဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သဟဇာတစံပွင့်လင်းဖိုင် Format ။
Blackmagic RAW ထောက်ခံတတိယပါတီကင်မရာများကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစုံရုပ်သံလိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ Analog အသံ။
ထိုကဲ့သို့သော DaVinci ဖြေရှင်းရန်အဖြစ်ရေပန်းစား NLE ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Blackmagic ဗီဒီယို 12G ထံမှတာဝန်များကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအမေရိကန် $ 2019 ကနေစက်တင်ဘာလ 795 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Assist Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
အဆိုပါ Blackmagic ဗီဒီယို၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံ 12G Assist အဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
2019 IBC Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကကူညီ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်း Blackmagic RAW 1.5 ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် ATEM Mini ကိုမိတ်ဆက်